I-Biography ka-Elizabeth waseYork, oyiNtlokazi yaseNgilani
Eyaziwa ngokuba: uphawu oluphambili kwimbali yaseTudor nakwiiMfazwe zeRos ; UMongameli waseNgilani, uKumkanikazi ka- Henry VII , intombi ka-Edward IV no- Elizabeth Woodville , unina kaHenry VIII, uMary Tudor, uMargaret Tudor
Imihla: NgoFebruwari 11, 1466-Februwari 11, 1503
Ukufumana iinkcukacha ezingundoqo malunga no-Elizabeth waseYork, khangela ngaphantsi kwe-biography - kuquka uluhlu lwabantwana bakhe kunye namanye amalungu entsapho.
Umtshato wakhe kuHenry VII wadibanisa iNdlu yeLancaster eyayiyimele uHenry VII (nangona wayibeka isithsaba saseNgilani ekunqobeni, engazalwanga), kunye neNdlu yaseYork, e-Elizabeth.
U-Elizabeth waseYork ngowona mfazi ukuba abe yintombi, udade, umntombazana, umfazi kunye nonina kumakhosi aseNgesi.
Umfanekiso kaElizabethe waseYork ngumfanekiso oqhelekileyo wenkosikazi emakhayeni.
Elizabeth ka York Biography
Wazalelwa ngo-1466, uElizabeth waseYork kwiminyaka yokuqala wayesetyenziselwa ukuzola ngokuthelekisana, nangona ukungavumelani kunye neentlanzi ezijikelezayo. Umtshato wabazali bakhe udale inkathazo, waza uyise wafa ngokukhawuleza ngo-1470, kodwa ngo-1471, mhlawumbi ama-challengers kwisihlalo sobukhosi sikayise sele ehlulwe aze abulawe.
Ngowe-1483, konke okutshintshileyo, kunye noElizabethe waseYork bephakathi kwesiqhwithi, njengowokuqala komntwana ka-King Edward IV. Umntakwabo u-Edward V uvakaliswa, kodwa wayengakhange abekwe isithsaba phambi kokuba yena kunye nomntakwabo uRichard, bevalelwe entolongweni yaseLondon ngumzalwana kaEdward IV, owathatha isithsaba njengoRichard III. URichard III wayenomtshato womzali kaElizabethe waseYork , wamangalela u-Edward IV.
Nangona uElizabethe waseYork wayekho ngedemezo eyenziwe engekho mthethweni, uRichard III wayexelwa ukuba uceba ukumtshata. Unina kaElizabhete , u- Elizabeth Woodville , noMargaret Beaufort , unina kaHenry Tudor, uLancastrian othi wayeyindlalifa esihlalweni sobukhosi, wacwangcisa elinye ikamva ngo-Elizabeth waseYork: umtshato ku-Henry Tudor xa ephanga uRichard III.
Iziphathamandla zombini - iindlalifa zodwa eziphilayo zika-Edward IV - zaphela. Abanye bacinga ukuba uElizabeth Woodville kufuneka ukuba wayazi-okanye ubuncinane wayedinga-ukuba oonyana bakhe, "abaPrinti kwiNqabayo," sele befile, kuba wafaka imizamo yakhe kumtshato wentombi yakhe kuHenry Tudor.
UHenry Tudor waphumelela ekugqibeleni uRichard III, wazibiza ngokuba nguKumkani waseNgilani ngokunyanisekileyo. Wazilibazisa ezinye iinyanga ngokutshata ne-Yorkist heiress, uElizabethe waseYork, de kube emva kokuqhawulwa kwakhe. Ekugqibeleni ba tshatanga ngoJanuwari, 1486, bazala umntwana wabo wokuqala, uArthur, ngoSeptemba, kwaye wayeyinkosikazi yaseKhalani kwinyanga kaNovemba kunyaka olandelayo.
Utshatsheli wenkosi yaseLancastry etshata nomfazikazi waseYorkist wahlanganisa i-red rose yeLancaster kunye ne-white white yaseYork, iphelisa iWars ye-Roses. UHenry wamkela uTudor Rose njengesimboli sakhe, obomvu obomvu nomhlophe.
U-Elizabeth waseYork wayehlala ngokuthula emtshatweni wakhe, ngokucacileyo. Yena noHenry babenabantwana abasixhenxe, abane bahlala besele baba ngabantu abadala-ipesenti ehloniphekileyo ngexesha.
UCatherine waseAragon , umzala wesithathu ka-Henry VII no-Elizabeth waseYork, watshata nomntwana wabo omkhulu, uArthur, ngo-1501.
UCatherine noArthur bagula ngokugula ngokukhawuleza emva koko, uArt wafa ngo-1502.
Kucatshulwa ukuba uElizabethe wakhulelwa kwakhona ukuba azame ukuba nendlalifa yindoda yesitulo emva kokufa kuka-Arthur, ukuba kwenzeka ukuba unyana ophilayo, uHenry wafa. Ukuzala izindlalifa kwakukho, emva koko, enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwiimbopheleleko zenkosikazikazi, ngokukodwa kumsunguli othembekileyo wendlu entsha, i-Tudors.
U-Elizabeth waseYork wafa ngo-1503 ngosuku lwakhe lokuzalwa, eneminyaka engama-37 ubudala, yeengxaki zokubeleka, umntwana wakhe wesixhenxe ekufeni kwakhe ekuzalweni. Abantwana abathathu kuphela boonyana bakaElizabethe basinda ekufeni kwakhe: uMargaret, uHenry noMary. U-Elizabeth waseYork wangcwatywa kwi-Henry VII 'Lady Chapel', eWestminster Abbey.
Ulwalamano lukaHenry VII no-Elizabeth waseYork alukho kakuhle, kodwa kukho amaphepha amaninzi ahlalayo athetha ukuba ubuhlobo bothando nobubele.
UHenry kuthiwa wayeke ukubuhlungu ekufeni kwakhe; akazange aphinde ashade, nangona mhlawumbi bekube nenzuzo yokuzibandakanya ngokwamanye amazwe ukuba enze njalo; kwaye wayichitha ngokunyanisekileyo umngcwabo wakhe, nangona wayedla ngokuqinile ngemali.
U-Elizabeth waseYork ungumlingiswa kaRickespeare kaRichard III . Akananto yokuthetha apho; uyingqungquthela yokutshata noRichard III okanye uHenry VII. Ngenxa yokuba uyindlalifa yokugqibela yaseYorkist (ukucinga ukuba abazalwana bakhe, iiNtloko kwiNqabayo, baye babulawa), ukuba abantwana bakhe bathi isithsaba saseNgilani siya kukhuseleka.
U-Elizabeth waseYork naye ungomnye wabalinganiswa abakhulu kwi-series ye-2013 INkosikazi yaseMhlophe kunye nomntu oyintloko kwinqaku le-2017 I-White Princess .
NgoJanuwari 18, 1486: watshata noHenry VII, uKumkani waseNgilandi
NgoNovemba 25, 1487: i-coronation e-Westminster Abbey
NgoFebruwari 11, 1503: wafela eNqabeni yaseLondon; wangcwatywa kuHenry VII 'Lady Chapel', eWestminster Abbey
Kwakhona waziwa ngokuba ngu- Princess Elizabeth Plantagenet, uKumkanikazi uElizabethe
U-Elizabeth waseYork Family:
Utata: Edward IV, uKumkani waseNgilandi
Umama: Elizabeth Woodville (uElizabeth Elizabeth), intombi kaJacquetta waseLuxembourg
Abazalwana: "Amakhosana eNqabeni" uEdron V noRichard, iDuke waseYork, noGeorge, uDuke waseBedford
odade: uMariya, uCecily, uMargaret, u-Anne, uCatherine, uBridget
unina: uMargaret waseBurgundy
Abantwana bakaElizabethe waseYork noHenry VII:
1486 (Septemba 20) - 1502 (ngo-Aprili 2): Arthur, Prince of Wales
U-1489 (ngoNovemba 28) - 1541 (ngo-Oktobha 18): UMargaret Tudor (otshatileyo u-King James IV waseSkotland; umhlolokazi; watshata no-Archibald Douglas, u-Earl wase-Angus;
1491 (Juni 28) - 1547 (uJanuwari 28): UHenry VIII, uKumkani waseNgilandi
1492 (Julayi 2) - 1495 (Septemba 14): uElizabhete
U-1496 (ngoMatshi 18) - 1533 (ngoJuni 25): UMary Tudor (otshatileyo uKumkani Louis XII waseFransi; umhlolokazi; watshata noCharles Brandon, uDuke waseSuffolk)
1499 (ngoFebruwari 21) - 1500 (ngoJuni 19): u-Edmund, uDuke weSomerset
1503 (Februwari 2) - 1503 (ngoFebruwari 2): uKatherine
Abanye bathi omnye umntwana, u-Edward, ozelwe ngaphambi kukaKatherine, kodwa kukho abantwana abasixhenxe kuphela aboniswe kwipayipi engumkhumbuzo oyi-1509.
Imibuzo yeMolly Ivins
UJosephine Baker Biography
Ziqhelise ekwenzeni Inkcazo elula ngeNkcazo kunye neMiphumo yesiGaba
Indlela yokwazisa i-Archangel i-Sandalfoni
IiNcwadana zeeNkcazo zeNkcazo ze-Social Online
Imfazwe ye-1812: Ukuvinjelwa kwe-Fort Erie
I-Chinese Astrology isebenza njani
Iimnandi malunga neengqungquthela ezibukhali
Uhlu lwe-Actinides List Elements
IConstantinople: Inkulu yolawulo lwaseMpuma WaseRoma
Iingoma eziphezulu zeRatt zee-80s